अत्याधुनिक सि.टि. स्क्यान सेवा बुटवलमा सुरु – Nepali Profile
Bikram Chhetri १५ जेठ २०७८, 8:47 pm
बुटवलको अस्पताललाईनमा अत्याधुनिक सि.टि. स्क्यान सेवा सुरु गरिएको छ । यस क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवामा लामो समय काम गरेका युवा व्यबसायीहरुको लगानीमा अत्याधुनिक सि.टि. स्क्यान सेवा सुरु गरिएको हो ।
४ करोड भन्दा बढी लगानीमा सञ्चालन गरिएको ‘रुपन्देही सि.टि. एण्ड डायग्नोसिस सेन्टर प्राली’मा राखिएको सि.टि. स्क्यान मेसिन ३२ सलाईसको हो । यसले उच्च क्वालीटीको फिचर स्क्यान गर्ने सञ्चालक दीपु केसीले बताउनु भयो ।
होलबडी सि.टि. स्क्यान, एन्जीयोग्राम, त्रिपलफेस लिभर स्क्यान, थ्रीडी, कलर स्क्यान लगायत सबैप्रकारका सि.टि. स्क्यान तथा क्यान्सर स्कृनिङ् समेतको विशेषता भएको अर्का सञ्चालक रमेल लम्सालले बताउनु भयो । बिरामीको स्वास्थ्य सेवामा अभाव पूर्तिका लागि उच्च प्रविधियुक्त अत्याधुनिक सि.टि. स्क्यान सेवा सुरु गरिएको सञ्चालक महेश पौडेलले जानकारी गराउनु भयो ।
बिरामीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर रेडियसन (विकिरण) कम उत्पन्न गर्ने मेसिन ल्याएको छ । अत्याधुनिक र उच्च गुणस्तरयुक्त भएकाले ईमेज राम्रो आउने छ भने विकिरण समेत कम उत्पन्न हुने भएकाले स्वास्थ्यमा समेत कम असर गर्ने वरिष्ठ रेडियोलोजिष्ट डा. सुरेश थापा बताउनु हुन्छ ।
गुणस्तरयुक्त प्रष्ट ईमेज आउने भएकाले बिरामीको डायग्नोसिस (उपचार)मा समेत डाक्टर चिकित्सकलाई सहज हुने अर्का वरिष्ठ रेडियोलोजिष्ट डा. अभिषेकमान बज्राचार्यले बताउनु भयो । अत्याधुनिक, उच्च गुणस्तर र दक्ष जनशक्तिको त्रिकोणात्मक सम्बन्धका कारण सेवा पनि चुस्त हुने सञ्चालकहरुले विश्वास गरेका छन् ।